WARBIXIN: Pogba, de Ligt, Griezmann & 5 Saxiix Ee Waaweyn Ee Laga Yaabo In Ay Dhacaan Kadib Saxiixii Eden Hazard – Wararka Ciyaaraha Maanta
WARBIXIN: Pogba, de Ligt, Griezmann & 5 Saxiix Ee Waaweyn Ee Laga Yaabo In Ay Dhacaan Kadib Saxiixii Eden Hazard
June 9, 2019 kooxda Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa furan suuqa kala iibsiga xagaagan waxana ay kooxaha reer yurub haatanba sameeyeen saxiixyo waaweyn oo uu ugu dambeeyay xiddiga Eden Hazard oo ugu dambayn ku biiray kooxda Real Madrid.
Taageerayaasha kubada cagta ayaa wali ka hadlaya ku biirista Eden Hazard ku biiray kooxda Real Madrid kana tagay kooxda chelsea oo uu muddo 7 sano ah joogay.
Laakiin arinta ayaan halkaas ku joogsan doonin iyada oo ay jiri doonto saxiixyo waaweyn oo ay samayn doonaan kooxaha reer yurub inta lagu jiro suuqa kala iibsiga Xagaagan.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 5-ta saaxiix ee la filayo in ay dhacaan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan:
1.Paul Pogba -> Juventus Ama Real Madrid:
Ku Biiristii Paul Pogba ee Man United xagaagii 2016 ayaa ahayd midii ugu muranka badnayn ilaa wakhtigan haatan la joogo laakiin isla arintaas ayaa mar kale soo laaban doonta xagaagan.
Kooxda Real Madrid ayaa doonaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe halka ay sidoo kale kooxdiisii hore ee Juventus doonayso adeegiisa in ay hesho adeegiisa si ay ugu xoojiso kooxda.
2.Ka Tagista Matthijs de Ligt Ee Ajax:
Waa saxiixa sida weyn loo wada sugayo xilli uu daafaca Matthijs de Ligt haatan xulka qarankiisa kala qayb qaadan doono finalka UEFA National league caawa kulan uu ka hor iman doono Cristiano Ronaldo iyo xulkiisa Portugal.
Xiddiga 19 jirka ah ayaa lala xiriirinayaa kooxo badan oo reer yurub ah oo ay ka mid yihiin PSG, Barcelona, Man United, Liverpool iyo waliba kooxo kale.
3.Antoine Griezmann -> Barcelona:
Antoine Griezmann ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxda Barcelona kadib markii uu xaqiijiyay in uu isaga tagayo kooxda Atletico Madrid dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer France ayaa laga yaabaa in uu xagaagan ku biiro kooxda Barcelona uguna biiro lacag dhan 120 milyan oo euro hadii ayna wax kale dhicin.
4.Nicolas Pépé -> Liverpool
Kooxda Liverpool ayaa la sheegayaa in ay si aad ah ugu dhawdahay saxiixa xiddiga reer Ivory Cost xilli ay jiraan warar sheegaya in ay Lille iyo Liverpool ka heshiiyeen saxiixa xiddiga lacag dhan 80 Milyan oo euro haatan Reds heshiiska shaqsiga ah kala hadlayso xiddiga.
5.Christian Eriksen -> Real Madrid:
Xiddiga reer Denmark ayaa iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda Tottenham taas oo la macno ah in uu galay sanadkiisii ugu dambeeyay ee heshiiska Tottenham sidaas darteed kooxda Real Madrid ayaa adegiisa u dhaqaaqi doonta hadii ay ku fashilanto saxiixa Paul Pogba.